पदक खोसिएपछि पूर्वमुख्यसचिवको यस्तो आक्रोश - Everest Dainik - News from Nepal
पदक खोसिएपछि पूर्वमुख्यसचिवको यस्तो आक्रोश
काठमाडौं, भदौ २० । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई दिने भनेको पदक अन्तिम समयमा खोसेको छ । उनले केही दिनअघि एसियाली विकास बैङ्क एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकबाट सरकारले आफूलाई फिर्ता गर्नुको कारणसहितको विचार अभिब्यक्त गरेका थिए ।
सरकारले सोही आधारमा पूर्वाग्राही भएर आफुले पाएको पदक खोसेको डा. सुवेदीले बताए । राज्यले निरन्तर प्रतिशोध लिँदै जाँदा थ्रेट महसुस भयो, अब सुरक्षा माग्नुपर्ने अवस्था आयो, उनले भने, उनी एक बर्षअघि मुख्यसचिव छाडेर एडीबी गएका थिए । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
ट्याग्स: somlal subedi, पदक, पूर्वमुख्यसचिव